नेकपाका केन्द्रीय सदस्यहरुले आफ्नो अभियानलाई जिल्ला तहमा विस्तार गर्ने
Home नेपाल तथा विश्व समाचार नेकपाका केन्द्रीय सदस्यहरुले आफ्नो अभियानलाई जिल्ला तहमा विस्तार गर्ने
३० नोभेम्वर २०१८,पार्टीभित्रको पक्षपात र व्यक्तिवादी एकाधिकारविरुद्ध नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का केन्द्रीय सदस्यहरुले आफ्नो अभियानलाई जिल्ला तहमा विस्तार गर्ने भएका छन् ।
पार्टी नेतृत्वलाई लिखित पत्र बुझाएका सत्तारुढ पार्टीका केन्द्रीय सदस्यहरु केन्द्रीय, जगन्नाथ खतिवडा, ठाकुर गैरे, रामकुमारी झाँक्री, डा. बिजय पौडेल, सहितका १८ केन्द्रीय सदस्यले केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाउन माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । बिहीबार काठमाडौंमा बसेको समिक्षा बैठकले देशभरबाट सकारात्मक प्रतिक्रिया आएको भन्दै अभियानलाई विस्तार गर्ने निर्णय गरेको हो ।
महासचिव बिष्णु पौडेलमार्फत दुवै अध्यक्षलाई बुझाइएको दस्तावेजको पक्षमा उभिने केन्द्रीय सदस्यको संख्या पनि बढेको छ । पछिल्लो समय सीता गिरी, दिलु पन्त, कृष्ण खनाल, पीएल श्रेष्ठ लगायतले अभियानमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।
यसमा पूर्व एमालेतर्फका नेताहरुको मात्र हस्ताक्षर छ । पूर्वमाओवादी खेमाका नेताहरुले पनि यो एजेण्डामा आफूहरुको पनि समर्थन रहेको बताएका छन् ।
सचिवालय र स्थायी कमिटीका सबैनेताहरुलाई भेटेर लिखित एजेण्डामाथि छलफल गरेका छन् । उनीहरुले अध्यक्ष प्रचण्ड, बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल,झलनाथ खनाल, बामदेव गौतम र नारायणकाजी श्रेष्ठसँग भेट गरेका छन् ।
सबै नेताहरुले पार्टी निर्माणका लागि केन्द्रीय सदस्यहरुले उठाएको चासो जायज रहेको प्रतिक्रिया दिएको खतिवडाले बताए । उनले आफूहरुले पार्टी निर्माण र शुद्धिकरणका लागि उठाएका एजेण्डामा देशभरका कार्यकर्ताबाट सकारात्मक प्रतिक्रिया पाएको भन्दै अभियानलाई ७७ जिल्लामै बिस्तार गरिने समेत बताए ।
हस्ताक्षरकर्ता केन्द्रीय सदस्यहरुले प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग पनि भेट्न समय मागेका छन् । तर, तीन-चार दिनदेखि समय माग्दा पनि प्रधानमन्त्रीको समय नमिलेको केन्द्रीय सदस्य ठाकुर गैरेले बताए ।सचिवलाय सदस्यहरु ईश्वर पोखरेल र रामवहादुर थापा बादलले पनि समय दिएका छैनन् ।
स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष ओली हस्ताक्षर अभियानप्रति असन्तुष्ट छन् । हस्ताक्षर गर्नेहरु विगतमा पूर्वएमालेमा ओली विरोधी खेमामा रहेका कारण पनि अभियानलाई आफूविरुद्ध केन्द्रित रहेको अर्थमा ओलीले लिएका छन् ।
तेश्रो चुनमुन नेपाली खुल्ला ब्याड्मिन्टन प्रतियोगिता भव्यरुपमा सम्पन्न
श्रीलङ्कामा भएको शृङ्खलाबद्ध विस्फोटनमा मारिनेहरूको सङ्ख्या २९०
श्रीलङ्कामा शृङ्खलाबद्ध विस्फोटन
गुल्मेलीहरु नौमती बाजामा रमे
चलचित्र दयारानी प्रदर्शनी बाट उठेको शत प्रतिशत मुनाफा गरीब तथा जेहेन्दार बिद्यार्थीहरुलाई सहयोग गरिने
अफगानिस्तानको राजधानीमा सशस्त्र व्यक्तिहरूले आक्रमण
नेपाली सेनाका सेवारत र अवकाशप्राप्त कर्मचारीमा आचार संहिता लागु हुने
राष्ट्रपति भण्डारीले वैशाख ११ गतेदेखि चीनको राजकीय भ्रमण गर्ने
भारतमा दोस्रो चरणको चुनाव सम्पन्न
पर्वत क्लव र मगर संघ हङकङले प्रथम लखन स्मृति कपको इतिहास रच्न सफल
गुल्मीमा भत्किएको पुलबारे विज्ञ टोलीले अनुसन्धान गर्ने
भूमाफियाले एक हजार आठ सय ६० रोपनी जग्गा हडपे
Donald Trump set for UK state visit in June
Gone in 7.69 seconds - Saints' Long scores quickest Premier League goal
I will nameaGolan town after Trump, says Israel's Netanyahu
Democrats and Trump: What does it take to impeachapresident?
Sports park construction starts
HK, Henan sign cultural pact
Bureau chiefs visit Hangzhou
March inflation up 2.1%
Co-living brings people together